CUKCUKသည် softwareနှင့်စားသောက်ဆိုင်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှု၊ လုပ်ငန်းပိုမိုမြန်ဆန်မှုနှင့်အမှားအယွင်းကင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။.
ဝန်ထမ်းများအတွက်အချက်အလက်များ (တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ ထိန်းချုပ်မှု)
CUKCUKသည်န်ထမ်းများအတွက်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်လုပ်ငန်းများကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ပေး နိုင်သည်။
နေရာမှာယူဝန်ဆောင်မှုများနှင့်စားသုံးသူများ ၏လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ပြပေးထားခြင်း
စားပွဲအလွတ်များကိုဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ရန် လျင်မြန်စွာဖော်ပြပေးခြင်း.
စာရင်းတွင်ပါဝင်သော ပစ္စည်းများကို ၀န်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့် အပ်ငွေ လက်ခံခြင်း.
၀န်ဆောင်မှုများကို လွယ်ကူစွာ ပြုပြင်နိုင်ခြင်း.
၀န်ဆောင်မှုအချိန်ဇယားများ စီမံခန့်ခွဲခြင်းကို နှောင်းနှေးမှု မရှိစေဘဲ ပြုလုပ်ပေးခြင်းဗီဒီယိုဖိုင် ကြည့်ရန်.
အောင်ဒါများကို မြန်ဆန်တိကျစွာ စိစဉ်ပေးခြင်း
ဖုန်း/တဘလတ်များ ဖြင့် အစားအသောက်စာရင်းများကို ပုံနှင့်တကွကြည့်ရှုနိုင်ပြီး အောင်ဒါမှာနိုင်ခြင်း.
စားပွဲမှ မှာသည်များကို မီးဖိုချောင်သို့ တိုက်ရိုက် အမှာစာပေးပို့ပေးခြင်း.
အော်ဒါမှာခြင်းများ ကို အချိန်မရွေး နေရာမရွေး ဖော်ပြပေးခြင်း.
ငွေပေးချေမှု မပြုခင် မှာယူထားသော ပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးပေးခြင်းဗီဒီယိုဖိုင် ကြည့်ရန်.
မီးဖိုချောင် အတွက် အပြင်အဆင်များ
ထိရောက်သောမီးဖိုချောင် စနစ်ဖြင့် ရရှိလာသော မှာယူမှုများကို စီစဉ်ခြင်း
မှာယူမှုများကို ချက်ခြင်း လက်ခံနိုင်ခြင်း.
မီးဖိုချောင် အပိုင်းတွင် မှာယူမှုများကို လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း.
မှာယူမှုများကို အသေးစိတ် ကြည်ရှုနိုင်ခြင်း ; နာမည်၊ အရေအတွက်၊ ချက်ပြုတ်ခြင်းနည်းလမ်း စသည်ဖြင့်.
ပြုလုပ်ပြီးသော အစားအစားများကို ကောင်တာသို့ လွယ်ကူစွာအသိပေးခြင်း.
ကောင်တာမှ ရိုးရှင်းသော TV မြင်ကွင်းဖြင့်မှာယူထားသောစားပွဲ စီသို့ ပို့ပေးနိုင်ခြင်း။.
ငွေပေးချေမှုကို တိကျမြန်ဆန်စွာ လုပ်ဆောင်ခြင်းငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး ပါဝင်ခြင်း
ငွေရှင်းမည့်စားပွဲကို အရောင်များဖြင့်ခွဲခြားထားသောကြောင့် လွယ်ကူစွာ သိနိုင်ခြင်း.
လျော့ဈေးများ၊အခွန်များ၊၀န်ဆောင်ခများအားလုံးကို အလိုလျောက် ပါဝင်ပေါင်းထည့်ပေးခြင်း။.
ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုး (ငွေသား၊ခရစ်ဒစ် ကတ်၊ဒက်ဘစ်ကတ်၊အီး-ဝေါလက် စသည့်)ဖြင့် ပေးချေနိုင်ခြင်း။.
ငွေသားလဲလှယ်သည့်အခါအပျောက်အဆုံး မရှိစေရန် စီစဉ်ပေးခြင်း။ဗီဒီယိုဖိုင် ကြည့်ရန်.
ဆိုင်ရှင်အတွက် အသွင်အပြင်များ (နောက်ကွယ်မှ ထိန်းချုပ်မှု)
အချိန်မရွေး နေရာမရွေး ထိရောက်သော နည်လမ်းများဖြင့်စားသောက်ဆိုင်ကို စီစဉ်နိုင်ခြင်း
မိုဘိုင်းဖုန်းများ မှအစီအရင်ခံစာများကို အွန်းလိုင်းပေါ်မှာ ချက်ချင်း ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။.
ဆိုင်ရှင်မှ စားသောက်ဆိုင် စီမံခန့်ခွဲခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကူညီရန် စာရင်းဇယားနှင့် စီစစ်ထားသော အစီခံစာ ၄၀ ကျော် (ရောင်းရငွေ၊အမြတ်၊စားသုံးသူဦးရေ စသည်ဖြင့်).
လုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံး ကို ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း : စားပွဲထိုးရဲ့ အော်ဒါမှာခြင်း ၊ ကောင်တာမှငွေရှင်းပေးခြင်း.
ဆိုင်ပြင်ပ တွင် ဆိုင်ရှင်အား စီမံခန့်ခွဲ နိုင်ရန် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခြင်း : စာရင်းများ စီစစ်ခြင်း၊ အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း ပုံစံ၊ ၀န်ထမ်းအချက်အလတ်များ တည်ဆောက်ခြင်း၊ သိုလှောင်ထားသော ကုန်ပစ္စည်း နှင့် တာဝန် များ ၊ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲခြင်း နှင့် အခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုများ.
ကုန်ကြမ်းနှင့်လိုအပ်သောပစ္စည်းဝယ်ယူမှု ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း
ဆိုင်အတွက်လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ကို တနေ့လျှင် ဆယ်မိနစ်ခန့် အချိန်ပေးယုံဖြင့် CUKCUK မှ ဆိုင်ရှင်အား ၀ယ်ရန်လိုသော ပစ္စည်းစာရင်းနှင့် ပေးအပ်ရမည်ဖြစ်သော အလုပ်တာဝန်များ ကို ကူညီ စီမံ ပေးထား ပါသည်။.
CUKCUK မှ ဆိုင်ရှင်အား သွင်းကုန် ထုတ်ကုန်များရဲ့ အခြေအနေနှင့် သိုလှောင်ရုံမှ ၀ယ်ရန်လိုအပ်သော ပစ္စည်းစာရင်း ကို အချိန်တိုတိုအတွင်း ထုတ်ပေးပါသည်။ ဒါအပြင် CUKCUK မှ ဆိုင်တွင်း ကုန်သွား သော ပစ္စည်းများကို ရောင်းချ ခြင်း၊ အရောင်းထိုင်းသော ပစ္စည်းများ ကို ထပ်ဝယ်မိခြင်းတို့မှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။.
အရောင်းမြင့်တင် ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ
သင့်တော်သော လျော့ဈေးများ နှင့် ဆွဲဆောင်မှု ရှိသော အရောင်းပုံစံ : X ၀ယ်လျှင် Y ရမည် ၊ ဘယ်လောက် % ၀ယ်လျှင်လျော့ဈေးဘယ်လောက် စသည့် တို့ အပြင် နောက်ထပ် အစီအစဉ်များ။ မတူညီသော လျော့ဈေးအမျိုးမျိုးကို ငွေရှင်းကောင်တာ မှ မှန်ကန်လျင်မြန်စွာ ငွေပေးချေမှု ပြုနိုင်ရန် အလိုလျောက် တွက်ချက်ပေးခြင်း.
ငွေကြေး ကိစ္စများ အား ကိုင်တွယ်ပေးခြင်း
ဆိုင်ရှင်မှစာသုံးသူများ ဖောက်သည်များ ကုန်ပေးသွင်းသူများ ၏ ငွေသား၊ ခရစ်ဒစ် ကတ်၊ ဘောင်ချာ စသည့်တို့နှုင့်ငွေချေခြင်းမျိုး ကို အလွယ်တကူ သိမြင်နိုင်ခြင်း၊ ဆိုင်ရှင်မှ ရောင်းရငွေများ ကို အခြား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ သို့ လွဲပြောင်းပေးနိုင်ရန် စီမံ နိုင်ခြင်း.
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ပေါ်မူတည်ပြီး စားသုံးသူများ ဖောက်သည်များရဲ့ ငွေစာရင်းလက်ကျန်များ ကို အလွယ်တကူ ကြည့်ရှု တွက်ချက် နှိုင်းယှဉ်နိုင်ခြင်း.
အစားအသောက်စာရင်းများကို ရှင်းလင်းချက်များ နှင့် တကွ အလွယ်တကူ လျင်မြန်စွာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဆိုင်ရှင် မှ ပါဝင်ပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းလုပ်ချိန်၊ ပစ္စည်းတူများ၊ ဦးစားပေး ပစ္စည်းများ စသည့်တို့ ကို အလွယ်တကူ ပြုပြင်နိုင်သည်။ ထိုပစ္စည်းများ ၏ဈေး နှုန်းကိုလဲ အလွယ်တကူ ဖုန်း တက်ဘလတ် များဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ နိုင်ပါသည်။.
၀န်ထမ်းများ၏ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို တည်ဆောက်ခြင်း
၀န်ထမ်းတယောက်ခြင်းစီအတွက် ယေဘူယျ အချက်လတ်များ အလုပ်လုပ်ချိန်များ ကို ဖန်းတီး/ပြန်ကြည့်နိုင်ခြင်း။ ၀န်ထမ်းတယောက်ခြင်းစီ ၏အလုပ်တာဝန်များကို အပြည့်အ၀ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ခွင့်ပြုချက်ပေးနိုင်ခြင်း.
စိုးရိမ်စရာမရှိသော ရက်ပေါင်း ၃၀ အစမ်းသုံးစွဲမှုအတွက် ယနေ့ဘဲစာရင်းပေးသွင်းလိုက်ပါ
+95 926 388 7766
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဗီဒီယို ကိုကြည့်ရန်